यी देवी देवताको मूर्ति भुलेर पनि घरमा नराख्नुहोस् ! – Hamrosandesh.com
यी देवी देवताको मूर्ति भुलेर पनि घरमा नराख्नुहोस् !
घरमा सुख, शान्ति छाओस् भनेर हामी घरमा भगवानको पुजा,अराधना गर्छौं । शान्ति, शक्ति र मुक्तिका लागि हामी विभिन्न शक्ति पीठहरुमा धाउने र भगवानको दर्शन गर्ने गर्छौँ र आशिर्वाद पनि लिन्छौँ । भगवानको कृपाले हाम्रो मनोकांक्षा पुर्ण हुने विश्वास राख्छौं । त्यसैले हामीले घरमा पनि विहान बेलुकी पुजा आरधाना गर्छौं । हरेक पुजाको सुरुवात गणेश भगवानबाट वा कुल देवताबाट गरिन्छ । हामीले घरमा पुजा, आरती गर्दा त्रुटी भयो भने फल प्रप्त हुँदैन ।
कुनै-कुनै देवी देवताको फोटो र मूर्तिहरु पनि घरमा राख्नु अशुभ मानिन्छ । लोकपथ डटकमले एजेन्सीको सहयोगमा कुन-कुन देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुन्छ, भन्नेबारे केही जानकारी तयार पारेको छ ।
हेनुहोस् यी देवी देवताको मूर्ति घरमा राख्दा अशुभ हुन्छ :-
२.काली : हिन्दु देवी पार्वतीको भयड.कर रुप हो काली क्रोध अवस्थाको महाकालीको मूर्तिले घरमा नकारात्मक शक्ति प्रवाह गर्छ । परिणाम स्वरुपमा घरमा कलह, दुःख, कष्ट र पारिवारीक संकट आउँछ । त्यसैले महाकाली शक्ति वा फोटो घरमा राख्नु हुँदैन ।
३.मुङ माला लगाएको महाकालीको फोटो घरमा राख्नुभयो भने तपाईको बच्चाको दिमागमा नकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्छ । उनिहरुमा नकारात्मक सोच भरिन सक्छ । त्यसैले कहिल्यै पनि खप्परको माला लगाएको मुर्ति पनि घरमा नरनख्नुहोस् ।
४.वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा शिवलिंग स्थापना गर्नु हुँदैन ।
५.शनिदेवको मुर्ति फोटो पनि घरमा राख्नु हुँदैन । शनिदेवलाई एकान्त प्रेमी, उदास र बैरागीको देवता मानिन्छ ।
६.राहु र केतु ग्रह शान्तिका लागि ज्यातिषशास्त्र अनुसार ज्योतिषहरुले राहु र केतुलाई पुजा गर्न सल्लाह दिन्छन् तर राहु केतुको मुर्ति, फोटो घरमा राख्नु हुँदैन।
७.भैरव भगवान शिवको रिसाह रुप हो । त्यसैले भैरवको मुर्ति तथा फोटो भुलेर पनि घरमा नराख्नुहोस् ।
९.गणेश, लक्ष्मी र सरस्वतीको उभिएको मुर्ति वा तस्बीर घरको मुर्तिमा राख्नु हुँदैन ।
१०.पुजा कोठामा एकै देवताका दुई मूर्ति पनि राख्नु हुँदैन। यसो गरे परिवार र आफन्तसँग मनमुटाव हुन जान्छ ।
११.पुजा कोठामा हनुमानको फोटो पनि राख्नु हुँदैन । घरमा अशान्ति र भाँडभैलो मच्चिन सक्छ ।